‘निजीकरण गरिएका उद्योग किनेर चलाएर देखाउनुस्’ | Ratopati
सरकारले उपद्रो गरेन भने पाँच प्रतिशत वृद्धिदर पुग्छः उदयशमशेर राणा
मेरो विचारमा यो अव्यावहारिक हो । कुनै पनि सरकारी कम्पनी खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्तैन भने निजीकरण गर्नु नै बेस हो ।
तर निजीकरण गरिएका कम्पनी पनि त मरणासन्न अवस्थामै छन् । धेरैजसो घाटामै गएका छन् ....
योजना आयोगको क्षमता बढाउन जरुरी छ । धेरै योजना राजनीतिक भनसुनका आधारमा भएका छन् । कुनै पनि योजना त्यहाँका सम्बन्धित सरकारले पठाउनुपर्छ र त्यसको अध्ययन र सर्भेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । ठूला आयोजना पनि समयमै सकिएका छैनन् । ८० प्रतिशत आयोजना समयमै सकिएका छैनन् ।
समयमै काम गर्न नसकेकालाई किन कारवाही भइरहेको छैन जस्तो लाग्छ ?
अधिकांश योजना काम गर्न नसक्ने परिस्थितिमा छन् भने जबर्जस्ती कान निमोठेर गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । हामीले कर्मचारीतन्त्र र योजना आयोगको क्षमता बढाउनुका साथै नेपाल सरकारका कर्मचारीबाहेक पनि बाहिरबाट विदेशी विज्ञ ल्याएर गरे पनि हुन्छ ।
कम्युिनस्ट सरकार जब चुनाव नजिकिन्छ तब सामाजिक सुरक्षा र वृद्धभत्ता बढाउने कुरा गर्छ । वृद्ध भत्ता बढाएर ५ हजार पुर्‍याउँदा के बिग्रन्छ ?
आवश्यक हो । तर वृद्धभत्ता दिँदा कस्तालाई दिने भन्नेचाहिँ हेर्नुपर्छ । अब क–कसलाई दिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । वृद्धभत्ता दिने उमेर बढायो भने अझ राम्रो हुन्छ । फराकिलो हिसाबले यसलाई हेर्नुपर्छ । यसको सुरुवात काँग्रेसले गर्‍यो, तर प्रचार एमालेले गर्‍यो ।
आगामी बजेटका लागि काँग्रेसभित्र कस्तो तयारी छ ?
काँग्रेस मानसिक रुपमा ५ वर्ष प्रतिपक्षमा बस्न तयार छ । किनभने यो सरकारलाई जनताले पाँच वर्षको म्यान्डेट दिएका थिए । तर राजनीतिक परिस्थिति मिले सरकारमा जान हुँदैन भन्ने पनि होइन ।
तपाईंको पार्टीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय पनि गरिसक्यो होइन ?
हामीले धेरै हदसम्म जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री भनेर सम्मान गरेका हौँ । तर हदभन्दा माथि गएपछि राजीनामा माग गरेका हाैँ र हाम्रै नेतृत्वमा सरकारमा जाने भनेका हाैँ । तर त्यसका लागि सहयोग चाहिन्छ । मुख मीठो गर्दै हतारिएर काँग्रेस सरकारमा जाने अवस्थामा छैन । तथापि स्थिर सरकार दिनचाहिँ तयार रहनुपर्छ भन्ने हो ।